CAF yoripisa Zim . . . Hre City ndiyo muparanzvongo
You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»CAF yoripisa Zim . . . Hre City ndiyo muparanzvongo
By Abel Ndooka on	 January 12, 2018 · NHAU DZEMITAMBO
Sangano reConfederation of African Football (CAF) rakaripisa Harare City mari inosvika $3 000 zvichitevera kutadza kwakaita chikwata ichi kuti chikwikwidze mumutambo weCaf Confederations Cup. CAF munguva pfupi yadarika yakanyorera sangano rinotungamira nhabvu muno reZimbabwe Football Association ichizivisa kuti iri kuripisa Harare City nekukundikana kwayakaita kunokwikwidza mumutambo uyu.
MaSunshine City Boys, sezita remadunhurirwa reHarare City, yakahwinha mukombe weChibuku Super Cup gore radarika zvichirevera kuti ndiyo yaifanira kunomirira Zimbabwe mumutambo weCaf Confederations Cup. Zvisinei, Harare City yakazozivisa Zifa kuti haisi kukwanisa kunokwikwidza mumutambo uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Chikwata ichi mwaka wadarika chakaburitswa muPremier Soccer League mushure mekutadza kuwana zvibodzwa zvakakwana. Mukushi wemashoko weZifa – Xolisani Gwesela – anotsinhira kuti Harare City yakatemerwa zvirango neCAF.
“Hongu, ichokwadi Harare City FC yakarangwa neCAF yakanzi ibhadhare faindi yeUS$3 000 zvichitevera kuramba kwayakaita kunokwikwidza mumutambo weCaf Confederations Cup nekuti ndicho chikwata chataive tanyoresa.
“Tainge tanyoresa Harare City FC sezvo iriyo yakahwina mukombe weChibuku Super asi yakazotizivisa pave paye kuti haisi kukwanisa kuzokwikwidza. Saka yakanzi ibhadhare mari iyi, asi imari shoma-shoma zvayo,” anodaro Gwesela.
Zvakadai, mukushi wemashoko weCity of Harare, Michael Chideme, anoti havasi kuziva nezvenyaya iyi uye vakamirira kuzoziviswa nezvayo kana paine zvirango zvavakatemerwa.
“Kutaura kuno hapana chatiri kuziva nezvenyaya iyi, ndambobvunza-bvunza kuti ndinzwisise asi hapana chandiri kuziva. Kana paine zvirango zvatakatemerwa takamirira kuzvizviviswa,” anodaro.
Achibvunzwa neKwayedza kuti kana zvirango izvi zvikatemerwa kuchikwata chavo zvinorevei, Chideme anoti, “Nyaya yacho tichaiongorora painouya, kwete iye zvino. Kana zvazosvika kwatiri ndipo patichatora matanho asi iye zvino hapana chati chauya kwatiri uye kana chatanzwa.”
Kutemerwa kweHarare City zvirango izvi neCAF zvinoreva kuti yatevera mumatsimba eHighlanders FC iyo yakambotemerwa zvirango zvekusakwikwidza mumutambo weCaf Champions League mugore ra2013.
Bosso yakange yanyoreswa neZifa kuti ndiyo ichakwikwidza mumutambo uyu zvisinei nekuti yaive isina hurongwa hwekukwikwidza izvo zvakaita kuti itemerwe zvirango neCAF.